I-Semalt ihambisa iindlela ezilula zokukhawulela izigidi zabantu base Twitter
Ukuba uzimisele ngokufumana abalandeli abaninzi kwi-Twitter, ufike kwindawo efanelekileyo. Ulapha, u-Artem Abgarian, uMphathi oyiNtloko kuMphathi weNtengiso Semalt , uya kukuxelela ezinye iindlela ezithandekayo zokufumana abalandeli abaninzi be-Twitter.
UkuCwangcisa i-Bio ephosakeleyo
Ngokuqhelekileyo, abantu baya kukubona kwi-biography yakho kunye nomfanekiso wakho wefayile. Yingakho kufuneka wenze ubuciko obunqwenelekayo nokunyanzela ukutsala abantu abaninzi nangaphezulu kwiprofayili yakho ye-Twitter. Ibhokisi lakho le-biography kufuneka lixelele ihlabathi zonke izinto ezisisiseko malunga nobuntu bakho, ubomi bentsapho kunye nobungcali. Lapha uza kufuneka ubhale abalinganiswa be-160 kwaye uchaze ngokucacileyo ngokwakho. Sebenzisa izithuba ezininzi kwaye uhlanganise zonke iziseko zobomi bakho ukukhuthaza abantu ukuba bakulandele.
Layisha umfanekiso owenene
Akuyi kuphazamiseka ukutsho ukuba ii-akhawunti ezintsha azikwazi ukulayisha imifanekiso yangempela. Kodwa ukuba i-akhawunti yakho ikhulile kuneenyanga ezintandathu, kufuneka ulayishe isithombe sakho kwaye uvumele umhlaba wazi ngobuntu bakho nobukeka bakho. Abantu abakwi-Twitter bakhangwa kwiiprofayili ezibandakanya iifoto, ngoko akufanele ulayishe i-selfie engapheliyo okanye eyakhayo njengokuba ingonakalise igama lakho jikelele.
Phendula kwiiTweets ngokubanzi
Akufanele uve neentloni ukuxubusha izinto ezibalulekileyo esidlangalaleni. Enyanisweni, kuya kuba kuhle ukuba uphendule kwii-tweets ngokucacileyo uze uthethe abahlobo abathile ukuba ubabandakanye kwiingxoxo. Ukuphendula ama-tweets esidlangalaleni, awukwazi ukufumana abalandeli abaninzi kwaye unganakwandisa ukuthembeka kwe-intanethi yakho. Kubalulekile ukutshintsha izicwangciso kwi-akhawunti yakho ye-Twitter kwaye ugcine iingxoxo zikarhulumente. ngelixa uxoxela into ebalulekileyo kubalandeli bakho. Vumela ihlabathi libone oko ucinga okanye uthi njengama-tweets aqhelekileyo.
landela iingcali kunye namaphepha ahloniphekileyo
Kufuneka uqwalasele iingcali ezilandelayo kwi-Twitter kunye namaphepha athandwayo. Tshintsha abanye abantu abadumileyo kwizithuba zakho ukuze ukwandise inani lakho labalandeli. Ngokulandela abantu abalungileyo, unokuqiniseka ukuba uqaphele kwi-inthanethi kwaye ungaqalisa ingxoxo ukwenyusa inani lakho labalandeli kwi-Twitter.
Akukho nto inokukhathazeka ngayo ukuba abanye abantu bayakukulandela kodwa unokufumana abalandeli abaninzi ngokubelana ngokubambisana nokuxoxa ngezinto ezintle kwi-Twitter.
Ukunceda abantu kwi-Intanethi
Kufuneka uncede abantu kwi-Twitter ukuba bandise inani lakho labalandeli. Ukusebenzisana nabanye kwaye zama konke okusemandleni akho ukuxazulula iingxaki zabo; kugcina yonke into ekuthethwa ngayo kwaye wenze imali kumajelo asekuhlaleni usebenzisa indawo yakho kunye neentengiso. Xa usebenza kwi-intanethi, ukuba ubona ukuba umntu ufuna uncedo lwakho, kufuneka ulungele ukubanceda.
Ekugqibeleni kodwa kungengona mncinci, kufuneka uhlale unetweet ukuze abantu bakhangwe kwiakhawunti yakho ye-Twitter. Yabelana ngomxholo womgangatho kunye nezinto ezinolwazi malunga nentsuku zonke njengoko le ndlela yodwa yokufumana abalandeli abaninzi kwi-Twitter ezinsukwini ezimbalwa. Akukho mfuneko yokufumana abalandeli bamanga njengoko bengenakukufumana inkokheli efanelekileyo okanye nayiphi na ishishini kwi-intanethi.